အတွေးအမြင် Archives - Richard Myo Thant
December 4, 2021 December 4, 2021 Richard Myo ThantLeaveaComment on တောပုန်းကြီး
308 Pageviews ရွက်ဖျင်တဲထဲမှာနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်နေရင်း ရုတ်တရက်လန့်နိုးလာတယ်။ ဘာသံမှကြားလို့မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် နှစ်ပေါင်းများစွာတောထဲမှာ သတိနဲ့လူသားစားကျားတွေကိုရင်ဆိုင်နှိမ်နင်းခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံအရ အန္တရာယ်ဟာ လက်တစ်ကမ်းအကွာမှာရောက်နေတယ်ဆိုတာကို သိလိုက်တယ်။ အိပ်ရာဘေးမှာကျည်ထည့်ပြီးအဆင်သင့်မောင်းထိုးထားတဲ့ရိုက်ဖယ်သေနတ်ဆီလက်ကအလိုလိုရောက်သွားချိန်မှာပဲ ရွက်ဖျင်တဲအဝကနေ “မလှုပ်နဲ့” ဆိုပြီးအမိန့်ပေးတဲ့အသံကိုကြားလိုက်ရတယ်။ ကျနော့်ရွက်ဖျင်တဲအဝမှာ အရိပ်တစ်ခုကမားမားမတ်မတ်ရပ်နေပါတယ်။ လက်ထဲမှာ ၁၂ ဗို့သေနတ်ကကျနော့်ဆီကိုချိန်ထားပါတယ်။ ဗိုလ်ဂေါ်ပြားရောက်နေပါပကော။ ကောဗရီမြစ်နားက ချိုင်နားမြစ်ကမ်းဘေးရှိ ၁၂ ဧကရှိတဲ့ကျနော့်ရဲ့စိုက်ခင်းကိုအလည်သွားချိန်မှာ ကျနော့်ရဲ့စိုက်ခင်းစောင့်’ရမ်ဂ’က ခြံထဲမှာရွက်ဖျင်တဲမထိုးပဲ သူနဲ့လာအိပ်ဖို့ခေါ်ပါတယ်။ ဆင်ဆိုးရှိတယ်ဆာဟစ် (Sahib ဆိုတာသခင်/အကြီးအကဲလို့ ကိုလိုနီခေတ်ကလေးစားသမှုနဲ့ခေါ်တာပါ) တစ်ယောက်တည်း Tent ထိုးအိပ်ရင်အန္တရာယ်များတယ်။ ဆင်ဆိုးရှိကြောင်းမကြားမိသလို ဒီအချိန်ဟာဒီချိုင်နားမြစ်ထဲမှာရေတစ်စက်မှမရှိတဲ့နွေရာသီဖြစ်ပြီး ဆင်တွေကကောဗရီမြစ်ဖက်မှာပဲရှိတဲ့အချိန်ပါ။ နောက်ဆုံးတော့ရမ်ဂက အသံခပ်အုပ်အုပ်နဲ့ Mumptyvayan ဗိုလ်ဂေါ်ပြားဒီနားမှာရှိနေတယ် ဆာဟစ်လို့ပြောပါတယ်။ ဟာ … အဆင်ပြေတာပေါ့။ မန်မတီဗရမ်း Mumptyvayan ဗိုလ်ဂေါ်ပြားကိုငါတွေ့ချင်တယ်လို့သွားပြောလိုက်ကွာ။ အမလေး … ဆာဟစ်သခင်ရယ် ကျနော်ကတောပုန်းဓားပြဗိုလ်နဲ့ ဘယ်လိုလို့ပတ်သက်မှာလဲလို့ သူ့ကိုယ်သူအရိုးသားဆုံးလူတစ်ယောက်ပုံနဲ့ ရမ်ဂကပြန်ဖြေပါတယ်။ တကယ်တော့ရမ်ဂကလည်းခေသူမဟုတ်ပါ။ ထောင်ကျဖူးသူပါ။ အမှုကတော့သူ့ပထမမိန်းမကိုသတ်မှုပါ။ အဲ့ဒီအမှုမှာသူသတ်တယ်ဆိုတာ ရဲကသဲလွန်စဖော်လိုက်နိုင်ပြီး ကံကောင်းလို့ကြိုးပေးမခံရတာပါ။ ဒုတိယမိန်းမမှာတော့ သူနဲ့ပြဿနာတက်ချိန်မှာ လက်စမပေါ်ပဲသူရှင်းလိုက်နိုင်ပါတယ်။ ရဲကသူ့မိန်းမရဲ့ဦးလေးကိုခေါ်စစ်လေရဲ့။ ဒီလိုပဲ တောမှာကတော့ ဘယ်သူမှမျက်မြင်သက်သေမရှိတော့ မိန်းမနှစ်ယောက်စလုံးကို သူသတ်တယ်လို့ပဲသံသယရှိကြပြီး ဘယ်သူမှတပ်အပ်မပြောနိုင်ဘူးမလား? အဲ … ရမ်ဂကတတိယမိန်းမကိုတော့မသတ်ဘူးခင်ဗျ။ စတုတ္ထမိန်းမထပ်ယူပြီး သူတို့အချင်းချင်းနောင်ဂျိန်သတ်ခိုင်းလိုက်တယ်။ သူက နံပါတ် ၅ နဲ့အလုပ်ရှုပ်နေလေရဲ့။ရမ်ဂက အဲ့လိုအကောင်။ တောရွာတွေမှာကဆင်းရဲတော့ ရမ်ဂလိုအလုပ်ကလေးအကိုင်လေးနဲ့အကောင်အတွက် မိန်းမပေါပါတယ်။ ကျနော်တို့ကသာ မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့လုံးလည်ချာလည်လိုက်နေတာ ရမ်ဂအတွက်ကတော့ မိန်းမထပ်ရှာတာ ခေါက်ဆွဲစားချင်လို့ instant noodle ယမ်ယမ်ခေါက်ဆွဲထုပ်ဖောက်ပြီးပြုတ်ရသလောက်မကြာပါ။ ထားပါတော့ … စောနကအကြောင်းပြန်ဆက်ရရင် မန်မတီဗရမ်းဆိုတာ ဗိုလ်ဂေါ်ပြားလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ ဗိုလ်ဂေါ်ပြားမှာနားထင်အထိကော့ထောင်နေနဲ့မုတ်ဆိတ်မွေးနှစ်ဖက်ရှိပြီး နဖူးပြောင်တာကြောင့် ဂေါ်ပြားရုပ်ပေါက်နေလို့ပါ။ 🇮🇳 အိန္ဒိယအစိုးရရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဝရမ်းပြေးစာရင်းထဲမှာဒီလိုရေးပါတယ်။ နာမည်အရင်းSelvaraj အသက် ၃၆ နှစ်၊ အရပ် ၅ ပေ ၇ လက်မ၊ ညာမျက်လုံးထောင့်ကနေနားရွက်အထိ ထင်ရှားတဲ့အမာရွတ်ရှိလို့ မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အိန္ဒိယရဲမှတ်တမ်းမှာမပါတာက ဗိုလ်ဂေါ်ပြားဟာမရှိဆင်းရဲသားတွေရဲ့ချစ်ခင်လေးစားခံရတဲ့ အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းကရော်ဘင်ဟုတစ်ယောက်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။ ဗိုလ်ဂေါ်ပြားဟာချမ်းသာပြီးလောဘကြီးတဲ့လူကုံထံတွေကိုသာရွေးဓားပြတိုက်ပြီးမရှိဆင်းရဲသားတွေကိုဝေငှပေးနေသူပါ။ အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းမှာရော်ဘင်ဟုအဖြစ် ဗိုလ်ဂေါ်ပြားထက်နာမည်ကြီးတာကတောပုန်းကြီးမန်ဆင်းပါ။ (တောပုန်းကြီးမန်ဆင်း Man Singh အကြောင်းကိုတော့ ၁၉၇၅ ခုနှစ်မှာ Sholay ရှိုးလေးဆိုပြီးရုပ်ရှင်ပြန်ရိုက်ထားကာ မင်းသားကြီးအမိတာဘဂျမ်းက Jai အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ဟိုခေတ်ကရုပ်ရှင်ရုံပြည့်ရုံမကရုံလျှံခဲ့တဲ့ မြန်မာတွေအကြိုက်ဇာတ်ကားတစ်ကားပါ။) အခုဗိုလ်ဂေါ်ပြားအကြောင်းဆက်ရရင် သူ့အကြောင်းခဏခဏကြားတာရယ် ကျနော်ကလည်းဒီနယ်မှာတကိုယ်တည်းသွားလာနေသူဆိုတော့ သူနဲ့တွေ့ဖူးချင်ပါတယ်။ တစ်ခါကဆည်ဆောက်ရန်တိုင်းတာဖို့ မျက်နှာဖြူအင်ဂျင်င်နီယာတစ်ယောက်နဲ့သူ့ကိုယ်ရံတော်အစောင့်တစ်ယောက်ရောက်လာပါတယ်။ ကျနော်ကသစ်တောတွေကိုရှင်းပြီးဆည်ဆောက်တာမကြိုက်တာနဲ့ သွားတွေ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုသွားတွေ့ချိန်မှာ မျက်နှာဖြူအင်ဂျင်နီယာရဲ့လက်နက်ကိုင်အစောင့်နဲ့တွေ့တော့ဗိုလ်ဂေါ်ပြားအကြောင်းစကားစပ်မိပြီး ကျနော်ကဗိုလ်ဂေါ်ပြားကိုမြင်ဖူးချင်ကြောင်းပြောပြမိပါသေးတယ်။ မျက်နှာဖြူအင်ဂျင်နီယာက သူလည်းစိတ်ဝင်စားပြီးတွေ့ဖူးချင်ကြောင်းကျနော်တို့ကိုရယ်ရယ်မောမောဝင်ပြောပါတယ်။ အမလေး … ဆာဟစ်သခင်ကြီးတို့ရယ် ကျနော်ကသူနဲ့တွေ့မှာကြောက်လွန်းလို့။ အန္တရာယ်များပါဘိသနဲ့တွေ့ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့လို့ အစောင့်ကပျာပျာသလဲပြောဆိုပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ဒေသခံတွေသူရဲကောင်းလို့ပြောနေတဲ့ ရော်ဘင်ဟုတစ်ယောက်ကိုကိုယ်တွေ့မိတ်ဖြစ်ဆွေဖြစ်တွေ့ဖူးချင်တာပါ။ ဟော … ကျနော်တွေ့ဖူးချင်တဲ့ ဗိုလ်ဂေါ်ပြားဟာ ကျနော့်ရွက်ဖျင်တဲဝမှာရောက်နေပါပြီ။ လသာတဲ့ညမို့ ဗိုလ်ဂေါ်ပြားကိုရွက်ဖျင်တဲဝမှာသေသေချာချာမြင်ရပါတယ်။ ကာကီရှပ်အင်္ကျီနဲ့ ခေါင်းပေါင်းနဲ့ နှုတ်ခမ်းမွေးကားကားကြီးနဲ့ ကျည်ဆံခါးပတ်ကြီးကိုပခုံးသိုင်းပြီးလွယ်ထားပါတယ်။ နောက်ပခုံးတစ်ဖက်မှာမှန်ဘီလူးတစ်ခုကို လယ်သာသားရေအိတ်နဲ့ထည့်ပြီးဆွဲထားပါတယ်။ ခါးမှာဓားမြှောင်တစ်လက်နဲ့ သူ့လက်ထဲက ၁၂ ဗို့သေနတ်ကကြေးရောင်သေနတ်ပြောင်းကို လရောင်ထဲမှာလက်ကနဲတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ “White man မျက်နှာဖြူ …. အသက်မသေချင်ရင် လက်ကိုအပေါ်မြောက်ထား၊ ရှိတဲ့ငွေအကုန်ထုတ်၊ ပြီးရင်ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာမှောက်နေ၊ လုံးဝမော့မကြည့်နဲ့ သေသွားမယ်။” ကျနော်ကသူ့ကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ကြည့်လိုက်ရင်း “ငါမင်းကိုသူရဲကောင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ကြားထားပြီး မိတ်ဆွေတစ်ယောက်အနေနဲ့တွေ့ချင်ခဲ့တာ။ အခုတော့မင်းကရဲတွေပြောသလို သူခိုးဓားပြပါပဲလားကွ!” သူကရှူးရှူးရှဲရှဲတစ်ချက်ဖြစ်သွားက သေနတ်ကိုမြှောက်ကာ မောင်းတင်လိုက်ပါတယ်။ “မင်းငါ့ကိုပစ်သတ်ရင်ပြဿနာအရမ်းကြီးသွားမယ်။ မျက်နှာဖြူတစ်ယောက်ကို မန်မတီဗရမ်းက ဓားပြတိုက်ပစ်သတ်သွားတယ်ဆိုရင် သတင်းစာတွေထဲမှာဟိုးလေးတကျော်ဖြစ်သွားပြီး တတိုင်းပြည်လုံးသိသွားလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒါဆိုရင် မိုးမီးလောင်ပြီ။ သတင်းစာတွေကပိုပိုသာသာဖွတာနဲ့ မင်းကိုအသေရရအရှင်ရရ ရဲကဆုကြေးတိုးထုတ်တော့မယ်။ သတင်းစာကမရေးဘူးပဲထား မျက်နှာဖြူတစ်ယောက်ကိုသတ်မှုဖြစ်လို့ ရဲမင်းကြီးကလူသတ်ကောင်ကိုမဖမ်းဆီးနိုင်ရင် အရှက်အကြီးအကျယ်ကွဲပြီ။ အဲ့ဒီတော့မင်းကိုတွေ့ရာသင်္ချိုင်းဓားမဆိုင်းလိုက်တော့မယ်။ ဆုကြေးတွေတနင့်တပိုးထုတ်တော့မယ်။ မင်းကိုအခုချစ်ခင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ မင်းအနားကလူတွေက “သိန်း ၃၀၀ ပေးရင် မောင်ကျော်ဘယ်မှာလဲဖော်မယ့်” ငွေနောက်လိုက်မယ့်အောက်တန်းစားအကောင်တွေချည်းပဲ။ ရဲကမဖမ်းဘူးပဲထားပါအုံး။ ငါ့လိုဒေသခံတွေနဲ့အတူလက်ပွန်းတတီးတသားထဲနေပြီးလူသားစားကျားရန်ကနေ သူတို့ကိုကာကွယ်နှိမ်နင်းပေးနေတဲ့သူတစ်ယောက်ကိုဓားပြတိုက်ပြီးသတ်ရင်မင်းကိုသူတို့ဘယ်လိုမြင်မှာလဲ? သူရဲကောင်းအဖြစ်လေးစားအုံးမှာလား?“ ဒီတစ်ချီမှာတော့ ဗိုလ်ဂေါ်ပြားအရှိုက်ထိသွားပါတယ်။ သေနတ်ဒင်ကိုမြေကြီးပေါ်ချထောင်လိုက်ရင်း လေသံပြောင်းသွားကာ … “ဆာဟစ်ဟာ ကျနော်ကြားဖူးသလို တကယ်သတ္တိကောင်းတဲ့သူပဲ။ အသက်ချမ်းသာပေးဖို့မတောင်ပန်၊ သေနတ်နဲ့ချိန်တာကိုနည်းနည်းမှမကြောက်တဲ့ ကျနော်ပထမဦးဆုံးမြင်ဖူးတဲ့သူပဲ။ ကျနော်ကိုမဖမ်းဖို့နဲ့ ရဲကိုသတင်းမပေးဖို့ လူကြီးလူကောင်းပီသစွာကတိပေးမလား?” “ငါကတိပေးပါတယ် မန်မတီဗရမ်း” ဆိုပီးထကာကျနော်သူနဲ့လရောင်အောက်မှာတင်းတင်းကျပ်ကျပ်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ မနက် ၂ နာရီတိတိဆိုတာကိုသတိထားမိလိုက်ပါတယ်။ လရောင်အောက်မှာ မန်မတီဗရမ်း ဗိုလ်ဂေါ်ပြားနဲ့ကျနော်ဟာ စကားစမည်ပြောဆိုကာတစ်ယောက်အကြောင်းတစ်ယောက်မေးရင်း နှစ်ပေါင်းများစွာကရင်းနှီးခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေရင်းတွေလိုဖြစ်သွားပါတယ်။ မန်မတီဗရမ်း ဗိုလ်ဂေါ်ပြားရဲ့နာမည်ရင်းဟာ Selvaraj ဖြစ်ပါတယ်။ ပြဿနာက သူ့အဖေနဲ့အိမ်နီးချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ရန်မီးကစတာပါ။ ဗိုလ်ဂေါ်ပြားဟာခပ်ငယ်ငယ်ပဲရှိသေးပြီး ဒီပြဿနာထဲမှာဝင်မပါပဲ လယ်ယာလုပ်ငန်းကိုပဲစိတ်ဝင်တစားလုပ်တဲ့ ရိုးရိုးသားသားလယ်သမားတစ်ယောက်ပါ။ တနေ့ညမှာတော့ ရန်စရှိတဲ့အိမ်နီးနားချင်းက ဆွေမျိုးအချို့နဲ့ဂိုဏ်းဖွဲ့ပြီး သူ့အဖေအိမ်အပြန်မှာစောင့်ရိုက်ကာသတ်ဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ […]
December 3, 2021 December 3, 2021 Richard Myo ThantLeaveaComment on တော်လှန်ရေးအောင်မြင်စေဖို့
302 Pageviews တနေ့ကအဖိုးအန်တိုနီယိုဘိုလီဗာနဲ့စကားပြောဖြစ်ပါတယ်။ အဖိုးအန်တိုနီယိုဟာလက်တင်အမေရိကတော်လှန်ရေးအတွင်း ချီကွေဗားရားနောက်ကနေလိုက်ပြီး တော်လှန်ရေးလုပ်ခဲ့ဖူးသူပါ။ အဖိုးဟာ 🇲🇽မက္ကဆီကန်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင် Emiliano Zapata အယ်မလီယာနိုဇာပါတာရဲ့အဆိုအမိန့်တွေကို ကျနော့်ကိုပြောပြခဲ့သူပါ။ “If there is no justice for people, let there be no peace for government. “ “ပြည်သူလူထုကိုတရားမျှတမှုမပေးတဲ့ ဘယ်အစိုးရမျိုးမဆို ငြိမ်းချမ်းရေးဘယ်တော့မှမရဘူး” တဲ့ကွ။ O avō အဖိုးမတွေ့တာကြာပြီလို့ နှုတ်ဆက်တော့ သူ့ကမင်းတို့မြန်မာပြည်အခြေအနေဘယ်လိုလဲလို့ မေးပါတယ်။ တကယ်တော့အဖိုးအန်တိုနီယိုဘိုလီဗာနဲ့ ကျနော်စသိခဲ့တာ ၂၀၁၅ ကတည်းကပါ။ သူ့မြေး ဆိုင်မွန်ဘိုလီဗာဟာကျနော့်ကိုအတော်ခင်သူပါ။ Xiah ဆိုတဲ့အွန်လိုင်းဂိမ်းတစ်ခုဆော့ရင်း သူနဲ့ကျနော်နဲ့ မိုင်နိုတောတောင်ပေါ်မှာ မိုင်နိုတောအင်ပါယာကိုသတ်ဖို့အတူထိုင်စောင့်ရင်း ဘဝအကြောင်းစကားတွေအများကြီးပြောဖူးပါတယ်။ တစ်ခါတလေမိုင်နိုတောအင်ပါယာကိုတစ်ယောက်တစ်လှည့်အပျော်သတ်ရင်း သူရယ်ကျနော်ရယ် အီဂျစ်ကဗွန်ရယ် တောင်ထိပ်က🔥မီးပုံဘေးမှာ အတူစကားထိုင်ပြောတတ်ကြပါတယ်။ ဆိုင်မွန်ဘိုလီဗာဆိုတာဘိုလီးဗီးယားတော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်ကြီးတစ်ယောက်ရဲ့နာမည်မို့ ရာဇဝင်မေးရင်းသူ့အဖိုးအန်တိုနီယိုဘိုလီဗာနဲ့ပါသိလာခဲ့တာပါ။ အခုလည်းအဖိုးအန်တိုနီယိုကို အဖိုးချီကွေဗားရားနောက်ကနေ လိုက်ပြီးတော်လှန်ရေးလုပ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြန်ပြောပါဦးလို့ ကျနော်ကမေးပါတယ်။ “ဒီမှာ ရစ်ချတ် … အဲ့ဒါတွေထက် တော်လှန်ရေးအောင်မြင်ချင်ရင် မဖြစ်မနေရှောင်ရမယ့်အချက်တွေကို မင်းကိုပြောပြမယ်” လို့ သူက လေးနက်တည်ကြည်တဲ့မျက်နှာနဲ့ပြောပါတယ်။ မင်းကြားဖူးသလားမသိဘူး။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းက မဟာမိတ် ပိုင်းလော့ တစ်ယောက်ဟာ ပြင်သစ်ပြည်မှာလေယာဉ်ပျက်ကျပြီး ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးတစ်ဖွဲ့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းခံရတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ညစာစားတော့ သူက 🍷ဝိုင်ကလေးသောက်ချင်တယ်။ ပြင်သစ်မှာဝိုင်ကောင်းကောင်းသောက်ရမယ်မှတ်ထားတာကိုး။ ဧည့်သည်မျက်နှာကိုကြည့်ပြီး ပါးနပ်တဲ့ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်က ဝိုင်ပုလင်းတွေထုတ်ခိုင်းလိုက်တယ်။ မိတ်ဆွေသောက်ပါ။ ကျနော်တို့ကိုကူညီလို့ ဧည့်ခံပါရစေတဲ့။ ခင်ဗျားတို့လည်းသောက်လေဆိုတော့ စိတ်မရှိပါနဲ့ ပြင်သစ်ပြည်မလွတ်မြောက်မချင်း အရက်သေစာမသောက်သုံးဖို့ ကျနော်အဓိဌာန်ပြုထားတယ်တဲ့။ ကျနော်ဟာခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ “အရက်သောက်ရင်ဆုံးဖြတ်ချက်အမှားတွေကိုချမိလိမ့်မယ်” တဲ့။ မဟာမိတ်ပိုင်းလော့ဟာတော်လှန်ရေးစခန်းကပြင်သစ်သူလေးအတော်ချောတာကိုသတိထားမိပြီး ပိုးပန်းသတဲ့။ ပြင်သစ်သူလေကပြန်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးပဲ။ ကျမတို့ပြည်ကြီးဟာ နာဇီတွေရဲ့လက်အောက်မှာကျရောက်နေတဲ့ ကံအဆိုးဆုံးကာလရောက်နေပါတယ်တဲ့။ မြို့ပေါ်မှာလူမဆန်အောင်အနှိပ်စက်ခံနေရတဲ့ ကျမမမြင်ဖူးတဲ့ကျမရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေရယ်၊ မတရားတဲ့ရန်သူကိုတိုက်ပွဲဝင်ရင်း ကျဆုံးသွားတဲ့ ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကိုမေ့ပျောက်ပြီး ကျမအချစ်ရူးမထနိုင်ပါဘူးတဲ့။ ကျမတို့နိုင်ငံမလွတ်မြောက်သေးသ၍ ဒါမျိုးကျမလက်ခံလို့မရပါဘူးတဲ့။ ကျမတို့ကိုရှင်တို့ကူညီနေတယ်ဆိုပေမယ့် ကျမတို့ကိုယ်ကျမအားကိုးဖို့လိုပါတယ်တဲ့။ ကျမကိုချစ်ရင်ရှင်ဝင်တိုက်ပေးပါတဲ့။ ပြတ်ကရော။ ငါတို့တော်လှန်ရေးလုပ်တော့ ချီရှိတုန်းကအဆင်ပြေတယ်။ နောက်တော့ခေါင်းဆောင်ကောင်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာ ကဂျိုးဂချောင်တွေနဲ့လုံးလည်ချာလည်လိုက်တော့တာပဲလို့ သူကဆိုပါတယ်။ တို့ကကွာ တော်လှန်ရေးလုပ်ဖို့ စစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းခွဲတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ အပေါ်ပိုင်းတိုင်းကိုဦးစီးတဲ့အကောင်က ဒါသမားကွဆိုပြီး သူကပါးစပ်မှာလက်မတေ့ပြီး မော့တဲ့ပုံလုပ်ပြပါတယ်။ သဘောကတော့ အရက်သမားလို့ပြောချင်တာပါ။ အောက်ဖက်တိုင်းကိုဦးစီးတဲ့ နောက်ခေါင်းဆောင်တစ်ကောင်က ဒါသမားကွဆိုပြီး နှာခေါင်းကိုလက်ညိုးနဲ့ထိုးပြပါတယ်။ သဘောကတော့တော်လှန်ရေးလုပ်ရမယ့်အချိန်မှာ တော်လှန်ရေးထက်နှာဘူးထဖို့တွေးနေတဲ့သူလို့ ပြောချင်တာပါ။ မင်းတို့နိုင်ငံမှာမင်းပြောဖူးတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေဟာ ဂျပန်ကိုတော်လှန်ခဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုလဲလို့မေးပါတယ်။ ဟာ … ကျနော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေက ခေါင်းဆောင်ပီသတယ်ဗျ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအရက်သောက်တယ်လို့ဘယ်တုန်းကမှမကြားဖူးဘူးဗျ။ အရက်ပုလင်းလိုက်ရှာရင်း ရဲအဖမ်းခံရတယ်လို့လည်းတစ်ခါမှမရှိခဲ့ဖူးဘူး။ ပြီးတော့ နှာထပြီးတော်လှန်ရေးကိုအာရုံမစိုက်ပဲ မော်ဒယ်ကောင်မလေးကိုအာရုံစိုက်နေတယ်ဆိုတာမျိုးလည်းလုံးဝမရှိဘူးလို့ကျနော်ကပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ အေး … အဲ့ဒါပဲ။ အဲ့ဒါက အရေးအကြီးဆုံးပဲကွလို့ သူကစားပွဲကို “ဒုံး” ကနဲထုပြီးစကားပြောပါတယ်။ […]
December 3, 2021 December 4, 2021 Richard Myo ThantLeaveaComment on နှောင်ကြိုးလေးတစ်မျှင်
312 Pageviews အိမ်ဘေးကနေအပေါ်ထပ်ကိုတက်တဲ့ သစ်သားလှေခါးကနေအိမ်ကြီးရဲ့အပေါ်ထပ်ကို တစ်လှမ်းချင်းတက်လှမ်းလာချိန်မှာ ကျွိကျွီ ကျွိကျွီနဲ့ သစ်သားမြည်သံသဲ့သဲ့ကိုကျနော်ကြားလိုက်ရပါတယ်။ အဲ့ဒီတဒင်္ဂမှာပဲ ကျွီကနဲ နှဲစစမ်းသလိုအသံကိုကြားလိုက်ရပြီး တဆက်တည်း ပတ်ဗေထိုးပတ်ဆိုပြီးဗုံသံကပါနှဲသံနဲ့အတူတဆက်တည်းနားထဲမှာကြားယောင်လိုက်ပါတယ်။ ကျနော့်ရဲ့စိတ်အစဉ်ဟာ တချိန်ကဒီအိမ်ကြီးအပေါ်ထပ်နဲ့ အောက်ထပ်အပြည့်သွားလာလှုပ်ရှား ဇာတ်တိုက်နေကြတဲ့ ဆိုင်းဆရာတွေ၊ ဇာတ်သမားမိသားစုတွေကိုပါမြင်ယောင်လာပါတယ်။ အခုတော့ အဖွားအိုလေးတစ်ယောက်ဟာ ဟိုးအရင်ကပျော်စရာအချိန်တွေကိုပြန်တမ်းတရင်း ဒီအိမ်ကြီးအပေါ်ထပ်မှာ သူ့မြေးမလေးနဲ့ကျနော့်ကိုစောင့်မျှော်နေလေရဲ့။ ကျနော့်အမျိုးသမီး”မီးမီး” ဟာ ဒီထားဝယ်မြို့ရှိအိမ်ကြီးမှာ မွေးကထဲကနေ ဆယ်တန်းအောင်တဲ့အထိနေလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူစင်ကာပူကိုစရောက်တဲ့နှစ်မှာ သူ့အဖိုးနဲ့အဖွားကိုသတိရလွမ်းဆွတ်တိုင်း သူ့အဖိုးတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်သဘင်အကြောင်းရယ်၊ သူ့ကိုသိပ်ချစ်တဲ့ မီးသတ်ဖိုးဖိုးတို့ပါတဲ့ ငယ်ဘဝတွေရယ်ကို မကြာခဏပြောပြတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီတုန်းကကျနော်ဟာခဏခဏကြားရတာ နှစ်ခိရှာရုံမကဆယ်ခိရှာနေလည်း တစ်ခါမှ သူမပြောဖူးတဲ့ပုံနဲ့နားထောင်ပေးနေကျဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အဖိုးဦးစိန်ကြဟာ တရုတ်ကြီးဖြစ်ပေမယ့် အနုပညာကိုအလွန်ချစ်မြတ်နိုးဝါသနာပါသူဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ငယ်ငယ်က မင်းသားလိုရုပ်အတော်ချောသူဖြစ်ပါတယ်။ “ဦးစိန်ကြ+ဒေါ်ရင်ပို” တို့ရဲ့ “ဆန်းသစ်ဇာတ်သဘင်” နယ်ထွက်တော့မယ်ဆိုရင် မထွက်ခင်မှာ ဇာတ်နောက်ဆုံးတိုက်တဲ့အနေနဲ့ သူတို့အိမ်ရှေ့မှာဇာတ်စင်ဆောက်ပြီးလာသမျှလူတွေကို ညလုံးပေါက်ဇာတ်ပွဲကပြလေ့ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ဆိုရင် မီးမီးတို့လမ်းထဲမှာ ညဈေးတန်းဖြစ်ပြီး လူတွေညနေဘက်မှာပွဲကြည့်ဖို့ကြိတ်ကြိတ်တိုးလာကြပါတယ်။ အထက်မှာကျနော်ပြောခဲ့တဲ့ နှဲစမ်းသံဟာ မီးမီးပြောပြောနေကျ အဲ့ဒီတုန်းကဖိုးဖိုးဦးသန်းဝင်းရဲ့နှဲစမ်းသံဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဖိုးဖိုးဦးသန်းဝင်းနဲ့ သူ့အမျိုးသမီးဖွားဖွားဟာ ကျနော့်အမျိုးသမီး မီးမီးလေးကိုအတော်ချစ်ကြပါသတဲ့။ ကျနော်ကမီးမီးပြန်ပြောတာနားထောင်ရင်း ဖိုးဖိုးဦးသန်းဝင်းကနှဲဆရာကြီးဆိုတော့ဖွားဖွားကမင်းသမီးလားလို့မေးလိုက်တော့ “မဟုတ်ဘူး၊ လူကြမ်းမိန်းမကြီးလုပ်တာတဲ့။” ဒါပေမယ့်ဖိုးဖိုးနဲ့ဖွားဖွားတို့ဟာ သဘောအရမ်းကောင်းပြီး အသက်ကြီးချိန်မှာ မီးမီးအဖိုးကလည်းဇာတ်အဖွဲ့ဖျက်သိမ်းလိုက်တာနဲ့ မှော်ဘီမှာအေးချမ်းစွာခြံလေးစိုက်ပြီးနေသွားကြသတဲ့။ ဪ … လူ့ဘဝကြီးမှာ သဘောမနောကောင်းပေမယ့်လည်း လိုအပ်ရင် လူကြမ်းအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ရတတ်ပါလားလို့ ကျနော်တွေးမိပါတယ်။ ကျနော့် Facebook အကောင့်ထဲက ညီမအချို့ရယ်၊ အမအချို့ရယ်ဆိုလည်း လူကြမ်းလုပ်သင့်ရင်ထလုပ်ကြတတ်တာကို ကျနော်တွေ့ဖူးပါတယ်။ မီးမီးလေးဟာ ချစ်မွေးပါလာသလားမသိ၊ ငယ်ငယ်က လူအတော်အချစ်ခံရတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်မှာများဟင်းမကြိုက်လို့ရှိရင် ဇာတ်သမားတွေဘာစားသလဲသွားကြည့်ပြီး ဇာတ်သမားဟင်းဝေစုသွားခွဲစားရင်စားတတ်သေးတာ။ ဒေါ်ခင်တင့်တို့ဆိုမီးမီးလေးကိုတအားချစ်တာပေါ့။ သူတို့လက်ထဲမှာ ထိန်းလာတာမလား။ ကျနော်တို့ထားဝယ်ရောက်တော့ ဒေါ်ခင်တင့်ခမျာ တောလက်ဆောင်တွေသယ်ပြီး တကူးတကလာတွေ့ရှာပါတယ်။ သို့သော်သူ့မှာမြေးတွေရနေပြီမို့ မြေးတွေကိုစိတ်မချတာနဲ့ နေ့ဝက်ပဲနေပြီး သူ့မြေးတွေဆီပြန်ပြေးတော့တာပဲ။ ဖိုးဖိုးဦးသန်းဝင်းတို့လင်မယားနဲ့ဒေါ်ခင်တင့်တို့အပြင် ဇာတ်အဖွဲ့သားတွေကမီးမီးလေးကို ဝိုင်းချစ်ကြပါတယ်။ “ဦးရွှေအ”ဆိုရင် မရှိတဲ့ကြားက မုန့်ဖိုးခိုးပေးတတ်သေးတယ်တဲ့။ ဦးရွှေအလို့ခေါ်တာက စကားမပြောတတ်လို့ပါ။ လူက စကားလည်းမပြောတတ်တော့ဇာတ်ထဲမှာကားလိပ်ဆွဲနဲ့ လက်တိုလက်တောင်းလုပ်ရတယ်။ ဇာတ်အဖွဲ့ထဲမှာတော့သူကလုပ်ခအနည်းဆုံးပေါ့။ တနှစ်တနှစ် ဇာတ်ပွဲရာသီကုန်လို့အိမ်မပြန်ခင်မှာ ဇာတ်လုပ်အားခတွေရှင်းပေးလေ့ရှိတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်လုပ်အားခရပြီဆိုရင် မီးမီးလေးကိုမုန့်ဖိုးခိုးပေးတာပဲ။ အခုအချိန်ဦးရွှေအကြီးဘယ်နောက်နေလဲမသိဘူးလို့မီးမီးကပြောတတ်တယ်။ ဘာမှအတုန့်အလှည့်မမျှော်လင့်တဲ့ ရိုးသားတဲ့ဦးရွှေအကြီးရဲ့ပကတိမေတ္တာပဲ။ ပြထားတဲ့ဝက်ဝံပုံနဲ့ဘာဆိုင်သလဲလို့မေးရင် ပြောပြမယ်ခဏစောင့်ပါ။ အခုအဲ့ဒီပုံထဲကသာလိကာလေးအကြောင်းကိုအရင်ပြောပြပါမယ်။ မီးမီးငယ်ငယ်က ဟိုလူကပေးဒီလူကပေးနဲ့အိမ်မှာ ကြက်တူရွေးအရောင်စုံ အကောင်၂၀ လောက်ရှိတယ်။ အဲ့ဒါလှောင်အိမ်နဲ့ထည့်ထားရဲ့သားနဲ့ အနီးအနားအိမ်တွေကကြောင်ဆိုးတွေက လှောင်အိမ်ကိုရအောင်ဖွင့်ပြီး ကြက်တူရွေးတွေကိုကိုက်သတ်တာကုန်ရော။ တနေ့တော့ မီးမီးဆီကို သာလိကာလေးတစ်ကောင်တောကရောက်လာတယ်။အရောင်အညိုရောင်လေးမို့ ညိုညိုလို့နာမည်ပေးသတဲ့။ မီးမီးကသူ့သာလိကာလေးကို အိမ်ထဲမှာကြောင်လာသတ်စားမှာကြောက်တယ်။ အဲ့ဒါနဲ့အိမ်အပြင်ခပ်မြင့်မြင့်မှာ သာလိကာလှောင်အိမ်ကိုဆွဲထားတာ […]
October 6, 2021 October 6, 2021 Richard Myo ThantLeaveaComment on “မမြဲသောအရာကိုဖက်တွယ်ထားသလား ဆန်ချီရို”
418 Pageviews ဒါပေမယ့် ရက်စက်မိုက်မဲတဲ့ရှိုးဂန်းလက်ထက်မှာ တတိုင်းပြည်လုံးကြိမ်မီးအုံးသလိုဖြစ်နေတယ်။ပြည်သူပြည်သားအားလုံးဟာ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်လာကြတဲ့အတွက် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှာပုန်ကုန်ထကြွကုန်ပြီ။ဆန်ချီရိုနယ်မှာလည်းပုန်ကုန်ထကြွမှု မကြုံစဖူးဖြစ်တဲ့အတွက် ရှိုးဂန်းရဲ့ခေါ်ယူကြိမ်းမောင်းခြင်းခံရတယ်။ သူဟာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ နယ်တစ်နယ်ကိုစားရတဲ့ နယ်စားတစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်။ အဲ့ဒီတုန်းက သူ့နယ်မှာတော့သူဟာ ဘုရင်ပဲ။ ဆန်ချီရိုဟာ သူ့ဇက်နဲ့ဝမ်းဗိုက်ကိုသူ မကြာခဏပြန်ပြန်ပြီးစမ်းကြည့်မိတယ်။ သူ့အနေနဲ့ ယခုပုန်ကန်ထကြွမှုကိုအပြတ်နှိမ်နင်းနိုင်မှ ခေါင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့မြဲမယ်။ မနှိမ်နင်းနိုင်လို့ကတော့ ကိုယ့်ဟာကိုဗိုက်ဖွင့်ပြီး ဟီရကိရိလုပ်ရင်လုပ်၊ ရှိုးဂန်းဒေါသထွက်လွန်းရင် ဟီရကိရိလုပ်ခွင့်တောင်မရရင်ပဲ ဇက်ကိုပိုင်းပြီးစီရင်ခံရနိုင်သေးတယ်။ အဲ့ဒီတော့ ဆန်ချီရိုရဲ့ဇက်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ အထုပ်ကြီးကအလေးကြီးဖြစ်နေတယ်။ သူ့အနေအထားက အချိန်မရွေးဇက်ပြုတ်သွားနိုင်တဲ့အနေအထား။ […]
September 3, 2021 September 3, 2021 Richard Myo ThantLeaveaComment on ?? အာဖကန်ကိုဖြတ်တိုက်ခဲ့တဲ့ဆိုက်ကလုံး
312 Pageviews ပုံထဲမှာ အာဖကန်မူဂျာဟစ်ဒင်တစ်ယောက်က ဆိုဗီယက် Mi-24D ဟယ်လီကော့ပတာကိုပစ်ချနေပါတယ်။ အာဖကန်သမိုင်းကြောင်းအကြမ်းဖျင်း time line လေးရေးပေးပါမယ်။ ဘာမှမရှိတဲ့ အာဖကန်မြေကို ဗြိတိသျှတွေ၊ ဆိုဗီယက်တွေ၊ အမေရိကန်တွေဝင်ရောက်ကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဝင်ကြည့်ခဲ့တဲ့ သုမနတို့ရဲ့ကျောတိုင်းမှာ အရှိုးရာတွေထင်ခဲ့တာချည်းပါပဲ။ ၁၉ ရက် ၈ လ ၁၉၁၉ မှာ ဗြိတိသျှတို့နဲ့စစ်ပြေငြိမ်းပြီး အာမန်နျူလာခန်ဟာ ဘုရင်အဖြစ်ခံယူခဲ့တယ်။ ၁၉၇၃ မှာ မိုဟာမက်ဒါဝတ်ခန်က သူ့ဝမ်းကွဲညီအကိုရှားဘုရင်ကို coup d’état လုပ်ကာ အာဏာတက်သိမ်းရာက အာဖကန်ဟာ ထောင်းလမောင်ကြေကာ လူပေါင်းများစွာ သေကျေပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ ? တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ပျက်စီးရခြင်းရဲ့ အဓိကအကြောင်းတရားကတော့ အာဏာလိုချင်လို့ အာဏာသိမ်းတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ အာဏာတည်မြဲရေးအတွက် ဘာမဆိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့လုပ်ရပ်ပါပဲ။ ၁၉၇၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ခရစ်စမတ်အကြိုညမှာဆိုဗီယက်တွေဝင်ပါတယ်။ အာဖကန်ကို ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံအဖြစ်ပြောင်းပေးကာ ဆိုဗီယက် USSR အင်ပါယာကြီးချဲ့ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ပါ။ […]
September 2, 2021 September 2, 2021 Richard Myo ThantLeaveaComment on မအိပ်ခင်တစ်ခုမေးပါရစေ။
296 Pageviews Facebook အပိတ်ခံရချိန်မှာ စာပိုဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ Psychosomatic medicine နဲ့ပတ်သတ်ပြီး အတွေးလေးတစ်စပေါ်လာပါတယ်။ “#ကိုယ့်ဟာကိုတကယ်ချစ်ကြရဲ့လား “သေချာလေးလေးနက်နက်တွေးစရာပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတကယ်မချစ်တဲ့သူတွေ ကမ္ဘာပေါ်မှာအများကြီးရှိပါတယ်။ သင်ရော … “ကိုယ့်ဟာကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လား“
August 14, 2021 September 6, 2021 Richard Myo ThantLeaveaComment on ? ဝင်ကစွပ်ကပေးတဲ့အသိ
244 Pageviews Whalefish လေးတွေအကြောင်းရှာဖတ်ရင်းနဲ့ ဝင်ကစွပ်တွေအကြောင်းရောက်သွားတယ်။ BBC ရဲ့ documentary ထဲမှာ hermit crab ဝင်ကစွပ်လေးတွေဟာ ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာတန်းစီနေရာယူနေကြတယ်။ ဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ အခွံအလဲအလှယ် trade လုပ်ကြတာ။ ဝင်ကစွပ်ဟာ နေပူတဲ့သဲသောင်ပြင်မှာ အခွံမရှိပဲကြာကြာအသက်မရှင်နိုင်ဘူး။ သူတို့အခွံလဲလှယ်ရင် အမြန်ဆုံးလုပ်ရတယ်။ မြင်ဖူးတဲ့သူရှားတယ်။ ဝင်ကစွပ်လေးတစ်ကောင်က သူ့ကိုယ်ခန္ဓာအရွယ်ကြီးလာတော့ နေရတာကျပ်လာပြီး ပိုကြီးတဲ့ခရုခွံကိုပြောင်းမှဖြစ်တော့မယ်။ အဲ့မှာ ခရုခွံအကြီးတစ်ခုကိုသွားတွေ့တယ်။ သူ့ထက်အများကြီးကြီးနေတယ်။ ဘာလုပ်သလဲဆိုတော့ အဲ့ခရုခွံနားမှာအသာလေးစောင့်နေလိုက်တယ်။ ခဏနေတော့ အခြားဝင်ကစွပ်တွေတစ်ကောင်ပြီးတစ်ကောင်ရောက်လာပြီး ကြီးစဉ်ငယ်လိုက်တန်းစီကြပါလေရော။ ဒီဗီဒီယိုထဲမှာ ကြည့်လို့ရတယ်။ အဲ့မှာအကြီးဆုံးကောင်က ခရုံခွံဘက်မှာနေပြီး အငယ်ဆုံးကောင်က အစွန်ဆုံးမှာနေလိုက်တယ်။ တန်းစီပြီးရယ်ဒီဆိုတာနဲ့ ဘောင်ဘီတယောက်နဲ့တယောက်လဲသလို အမြန်ချွတ်လဲတော့တာပဲ။ အကြီးဆုံးအကောင်က သူ့အခွံထဲကအမြန်ထွက်ပြီး ခရုခွံကြီးထဲအမြန်ဝင်လိုက်တာနဲ့ ဒုတိယအကြီးဆုံးအကောင်က သူ့အရင်အခွံကိုဝင်ယူနေပြီ။ အဲ့လိုနဲ့ဆင့်ကဲဆင့်ကဲအခွံလဲလှယ်သွားတာ အရမ်းစစနစ်ကျတယ်။ Moral of the Story ============= […]